Dhagax dixeed wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad ka jawaabto fariimaha ku xiran iPhone | Wararka IPhone
Dhagax dixeed wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad ka jawaabto fariimaha ku xiran iPhone-ka
In kasta oo xaqiiqda ah in qaar badani yihiin adeegsadayaasha ku adkaysanaya inay xaqiijinayaan in dhagax dixeed aad si sax ah u samayn karto sida kan Apple Watch, oo labaduba ku xidhan iPhone, illaa aad isku daydo shaki kama tagi kartid. Dhagax dixeed ayaa kaliya noo ogolaanaya inaan helno ogeysiisyo isla markaana xakameyno dib u soo celinta muusikada, halka Apple Watch aan ka jawaabi karno emaylka, farriimaha, wicitaanada, maareynta ogeysiisyada ... Xaddidaadda Pebble waa mid la mid ah tan Android Wear ay wajaheyso dalabka ay ku soo bandhigtay App Store dhowr bilood ka hor si ay u awoodaan inay isticmaalaan qalabka leh nidaamkan hawlgalka ee ku jira iPhone.
Waxay umuuqataa in Pebble uu doonayo inuu ka saaro xanibaadan oo uu hada sii daayay adeeg cusub oo awood u leh inuu ka jawaabo farriimaha na soo gaaraya tooska ah ee smartwatchkeena maadaama aan ku sameyn karno Apple Watch. Laakiin dabcan, oo leh xaddidaadyo. Marka horeba, shaqadan waxaa loo heli karaa oo keliya moodooyinka ugu casrisan sida Waqtiga Dhagax-dhigga, Bir-xireyaasha birta iyo Wareegga Waqtiga. Si kale haddii loo dhigo, moodelladii ugu horreeyay ee ay ka bilaabeen suuqa ayaa bilaabaya inay galaan waddada dayaca.
Xaddidaad kale oo aan helno waa taas oo keliya ku xaddidan isticmaaleyaasha shirkadda AT&T qandaraasyada dib-u-bixinta, ma aha ansax kuwa isticmaala kaarka lacag-bixinta. Xaddidaadda saddexaad ee aan helnay waxay tahay in farriimaha lagu diro shirkadda taleefanka, sidaas darteed kama muuqan doono codsiga farriinta ee iPhone-keena.
Sidii aan soo sheegay xilligan waxaa kaliya lagu heli karaa AT&T laakiin tan iyo markaa Pebble waxay sheeganayaan inay la shaqeynayaan shirkado kale si loo gaaro heshiisyo loona siiyo ikhtiyaarkan shirkadaha kale ee taleefannada Mareykanka. Haddii aad tahay isticmaale AT&T, hoosta waxaan ku tusaynaa tillaabooyinka la raaco si loo isticmaalo shaqadan cusub.
Cusboonaysii barnaamijka 'Pebble Time iPhone' ee ku saabsan nooca 3.4 ama ka sareeya.
Marka xigta waa inaan hubinno in noocayaga loo yaqaan 'Pebble model' uu leeyahay nooc firmware ah 3.7 ama ka sareeya.
Laga soo bilaabo arjiga iPhone-ka waxaan tagnaa Menu> Settings> Ogeysiisyo waxqabad leh si loo dhaqaajiyo Jawaabaha Qoraalka
Marka xigta waa inaan raacnaa tilmaamaha ka muuqda shaashadda.
Marka aan habaynno jawaabaha, waxaan ka jawaabi karnaa dhammaan fariimaha aan ku helno amarrada codka ama liiska jawaabaha horay loo sii cayimay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Dhagax dixeed wuxuu hadda kuu oggolaanayaa inaad ka jawaabto fariimaha ku xiran iPhone-ka
Qalin Apple ah oo loogu talagalay iPhone 7? Maya Fadlan
Jawaabaha waxay bilaabayaan inay u yimaadaan isticmaalayaasha Pebble ee ku xiran iPhone-ka